Nabadoon Dacar “Afey wuxuu rabaa inuu isku diro dadka dega Hiiraan iyo Sh.dhexe” – STAR FM SOMALIA
Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa si kulul uga hadlay hadalkii ka soo yeeray Wakiilka IGAD ee arimaha Somaliya Danjire Maxamed Cabdi Afey, kaasi oo ku aadanaa in Maalinta Sabtida Odayaasha reer Hiiraan iyo kuwa Shabellaha Dhexe Jowhar ay isugu imaanayaan si ay uga wada hadlaan wixii ay tabanayaan.
Nabadoon Dacar Xersi oo ka mid ah Odayaasha ka soo jeeda Gobolka Hiiraan, ayaa sheegay qorshaha uu wato Danjire Afey inay tahay isku dirka dadka dega labada Gobol, waxaana uu tilmaamay inuu doonaayo colaad cusub inuu xilligaan ka dhex abuuro dadkaasi.
Nabadoonka ayaa ka digay dhibaatooyin Danjire Maxamed Cabdi Afey uu masuul ka yahay inay ka biloowdan labada Gobol, isaga oo intaasi ku daray dadka labada Gobol dega inay yihiin dad walaalo ah oo ehel ah xilli kastana wada hadli kara.
Waxa ay si aad ah Odayaasha uga caroodeen faragelinta IGAD ay ku hayso arimaha ku aadan sameynta Maamulka Hiiraan iyo Shabellaha dhexe iyo amarada loogu yeeraayo Odayaasha uu bixiyay Danjire Afey.
“IGAD iyo Afey waxa ay wadaan hadaan laga qaban, dagaalo badan wadamada waa ay ka dhacaan waana ay ka dhacayaan, dadka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe dega ayuu rabaa inuu isku diro oo dadkaasi ehelka ah, ninkaasi Beesha caalamkana waan u sheegaynaa dadka waxgartana waan u sheegaynaa oo Somalida ku abtirsado, ninkaasi haka joogo dhibaatada uu wado, Madaxweynaha ayaa yimid, Ra’iisul Wasaaraha ayaa yimid Wasiiro ayaa yimid kama fadli badno dadkaasi.” Ayuu yiri Nabadoon Dacar Xersi oo la hadlay Idaacada Mustaqbal.
Lama oga sida Maalinta Sabtida ah ay ku suurageli doonto in Odayaasha Dhaqanka reer Hiiraan ay tagaan Magaalada Jowhar si halkaasi uu uga biloowdo Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Madaxda Dowladda ayaa dhowr mar waxa ay isku dayeen inay qanciyaan Odayaasha Dhaqanka Reer Hiiraan si looga gudbo caqabada hor taagan dhismaha Maamulkaasi, laakiin arintaasi ayaa suuragal noqon weyday.
Danjire Afey oo ka digay in la hor istaago dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe